About Us - Ningbo Fenghua Aootan utsanana Co. Ltd
360 ° Plastic kusveta
Kugamuchidzana shawa zvigaro
Ivai nenzvimbo Bar
Aootan utsanana Ware Co., Ltd, sezvo zvese mugadziri uye Distributor utsanana zvigadzirwa, isu zvinopa yepamusoro chivako & pombi rinopiwa kusanganisira nyanzvi uriri matongo grates kuti chitoro uye zvokutengeserana vatengi, izvo kuwanisa utsanana indasitiri ane yakasiyana uye unhu siyana mishonga kurudyi mutengo.
Rinova Platinum Stainless Steel uye anouya vazhinji mhando drains the, izvo zvinosanganisira yokugezera drains the, yokugezera migero, uriri drains the, yokugezera drains the, douchegoot, duschrinne, yokugezera gwara zvaimutambisira, caniveau of suihku, muchinjiziri zvaimutambisira, Linear drains the, Linear quattro dhureni ... zvigadzirwa dzedu dzave kushandiswa mudzimba, hotel, pool ... uye ivowo salable mhiri Australia, Europe, USA uye zvichingodaro. Saka kana uri kupedza chiduku yokugezera gadziridzo, vachitsvaka yokugezera drains the, zvinganaka kushandisa drains the.
We noushamwari vatengi kuuya kutaurirana bhizimisi nesu.
Ningbo Fenghua Aootan utsanana Ware Co. Ltd iri dzidzira mukubudisa yokugezera drains the uye yokugezera nenhumbi vane ruzivo pamusoro makore 8. Tinotenda kuti tine chimwe chezvinhu yepamusoro, zvakanaka kuvakwa uye rakapamhamha-siyana pazviridzwa ose yokugezera nenhumbi yose Aootan nyika. It ndiyo yakanaka sarudzo kuti ano misha kushongedzwa, hotels uye zvivako zvebhizimisi.